BYD သည် အာဖရိက ရှိ လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း ခြောက် ခု ဝယ်ယူ ရန် ညှိနှိုင်း နေသည် – Pandaily
BYD သည် အာဖရိက ရှိ လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း ခြောက် ခု ဝယ်ယူ ရန် ညှိနှိုင်း နေသည်
Jun 01, 2022, 14:26ညနေ 2022/06/01 23:34:41 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD သည် အာဖရိက ရှိ လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း ခြောက် ခု ဝယ်ယူ ရန် ညှိနှိုင်း နေသည်။သတင္းစာဒီ ကိစ္စနဲ့ ရင်းနှီး တဲ့ သတင်းရင်းမြစ် တွေကို ကိုးကားပြီး အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း ၆ ခုတွင် ၂. ၅% အဆင့် လီ သီ ယမ် အောက်ဆိုဒ် ၏စုစုပေါင်း အရင်းအမြစ် သည် တန်ချိန် ၂၅ သန်း ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ၎င်းသည် လီ သီ ယမ် ကာဗွန်နိတ် တန်ချိန် ၁ သန်း နှင့်ညီမျှသည်။
အကယ်၍ သယံဇာတ တန်ချိန် ၂၅ သန်း ကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ ပါက လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၂၇. ၇၈ သန်း ၏စွမ်းအင် ဘက်ထရီ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။ BYD ၏ ၂၀ ၂၂ ရောင်းအား သည် ၁. ၅ သန်း ဖြစ်သည်။ ဤ ခန့်မှန်း ချက်အရ BYD သည် လာမည့် ဆယ် နှစ်အတွင်း ကုန်ကြမ်း များ လုံလောက် စွာ ရရှိ မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ သတင်းရပ်ကွက် များအရ လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း ၆ ခုအနက် မှ အများစုသည် လာမည့် လတွင် စတင် တင်ပို့ နိုင်ပြီး ယခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် လီ သီ ယမ် ကို BYD ၏ blade battery ဖြင့် တပ်ဆင် နိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
BYD သည် lithium အရင်းအမြစ်များကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ အရှိန်မြှင့် တင်ခဲ့သည်။ Integrity Lithium သည် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် BYD ကို မဟာဗျူဟာမြောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူအဖြစ် မိတ်ဆက် ရန်ရည်ရွယ် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် Salt Lake Industry Co., Ltd. က ကုမ္ပဏီသည် BYD ၏ တန်ချိန် ၃၀၀၀၀ တန် ဘက်ထရီ အဆင့် lithium carbonate စီမံကိန်းအတွက် lithium ထုတ်ယူ ခြင်းနည်းပညာ စမ်းသပ် မှုများပြုလုပ် ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD သည် ဘရာဇီး စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို ထုတ်ဖော် သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အကုန်တွင် လီ သီ ယမ် ကာဗွန်နိတ် စျေး နှုန်းသည် တစ်တန် လျှင် ယွမ် ၅၀၀၀၀ ခန့် ရှိသော်လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ ရောင်းအား မြင့်တက် လာသည်နှင့်အမျှ လီ သီ ယမ် ကာဗွန်နိတ် သည်ယခုနှစ် မတ်လတွင် တစ်တန် လျှင် ယွမ် ၅၀၀ ၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄ ၆၅) ထက်ကျော်လွန် ခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ် ပါဝါ ဘက်ထရီ များ၏ ကုန်ကျစရိတ် ယွမ် 10,000 မှ 20,000 အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကား ကုမ္ပဏီများသည် လီ သီ ယမ် သတ္တုတွင်း များ ဝယ်ယူ ခြင်း၊ မဟာဗျူဟာ မိတ်ဖက် များ ရှာဖွေ ခြင်း၊ ရေရှည် သဘောတူညီ ချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းဖြင့် ထောက်ပံ့ရေး ပိတ်ဆို့ ခြင်းနှင့် လီ သီ ယမ် ဘက်ထရီ ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း စနစ်များ စသည့် lithium အရင်းအမြစ်များ ကိုစတင် ထိန်းချုပ် လာကြသည်။